> Resource > Mac > Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPod si Mac
Hayso badan oo ay ka mid yihiin files music, video iyo sawiro ku saabsan iPod, oo aad rabto in lagu wareejiyo si aad Mac? Nasiib darro, shirkadda Apple oo keliya kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso sawiro iyo videos qabtay in aad Camera Roll iPod si Mac ka dib markii xira iPod si Mac la cable USB ah. Sida wareejinta kale faylasha, muusig iyo cajallado fiidyow, waxaad dooran kartaa ma jiro in la isticmaalo software ah kala iibsiga iPod si Mac, dhihi Wondershare TunesGo (Mac) . Iyada oo ay caawimo. Waxaad isla wareejin karaan music, sawiro, videos music, bandhigyada TV, qoraal cod, podcasts, Lugood U iyo audiobook aad iPod si Mac ah.
Haddii aad leedahay PC Windows ah, waxaad u tagi kartaa si Wondershare TunesGo (Windows) inuu u dhaqaaqo files ka iPod si Mac. Si ka duwan version Mac ah, waxaa ku caawinaysa in aad wareejiso music, videos, sawiro, xiriirada, SMS, iyo iMessages in PC Windows ah.
Fiiro gaar ah: TunesGo (Mac) waa wax yar oo kala duwan oo ka TunesGo (Windows). TunesGo (Mac) ma taageeri xiriirada iyo SMS hadda, laakiin shaqo wanaagsan kala wareejinta music, videos, sawiro, buugaag, cadaymaha cod u dhaxeeya ah taabashada iPod iyo Mac ah. Ka sokow, waxa kale oo kuu oggolaanaysa in aad heeso iyo playlists wareejiyo ka nano iPod / shaandheeyn / classic si Mac.
Sidee si ay u gudbiyaan files ka iPod si Mac
Dooro version saxda ah ee TunesGo oo ku xidh aad Mac ama Windows PC. Halkan, waxaan ku tusi doonaa sida loo wareejiyo files iPod in la Mac Mac version ah. Hadda, aynu iska baarto.
Tallaabada 1. Isku aad iPod si Mac ah
Si aad u billowdo la, aan bilowno TunesGo (Mac) on Mac ah. Hel aad iPod xiran Mac la cable USB ah. IPod si Mac software Tani waxay si toos ah loo ogaado doonaa iPod ka dibna waxa ay u muujiyaan in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Nuqul files ka iPod si Mac
Hadda, waxaa la gaaray waqtigii ay si uu idiin tuso jidka si ay u gudbiyaan music, videos, sawiro ku saabsan iPod si Mac mid mid.
Music Nuqul ka iPod si Mac
Qaabka ugu dhakhsaha badan si aad nuqulka music oo dhan ku iPod si Mac waa in guji "Si Mac". Daaqadda file browser, caleenta aad Mac si aad u hesho gal ah si loo badbaadiyo music laga dhoofiyey.
Ama, waxaad samayn kartaa iibsiga music ah ee habkan. In galeeysid bidix, guji "Music" si ay u muujiyaan suuqa kala maamulka music ah. Hubi songs in aad rabto in aad nuqulka in Mac. Markaas, guji "Dhoofinta". Dul folder halkaas oo aad go'aansato in aad badbaadin heesaha.
Videos ka iPod dhaqaaq Mac
Tag Movies, TV muujinaysaa, Lugood U, iwm galeeysid ka tagay. Daaqadda dhiganta on xaq, dooran videos oo guji "Dhoofinta". Browse aad Mac u dhigay waddo badbaadiyo in uu kaydiyo videos dhoofinta.
Sawiro ay kala soo wareegeen iPod si Mac
Guji "Sawirro" galeeysid ah. Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax uu furmo suuqa maamulka sawir ku Murayaad saxda ah. Tiirka midigta, aad arki doonaa Roll Camera. Photo Stream oo Photo Library. Dooro mid ama folder album hoos Photo Library. Markaas dooran photos in aad jeceshahay in lagu wareejiyo si aad Mac. Guji "Dhoofinta". Marka uu furmo suuqa file caleenta ka soo booda, dooro meel in lagu badbaadiyo sawirrada dhoofiyo.
Haddii aad qabtay qaar ka mid ah videos aad iPod, sidoo kale iyaga oo aad dhoofin karto si aad Mac. In Video hoostiisa ku giringiriya Camera. Dooro videos aad doonayay qabtay oo guji "Dhoofinta". Sidoo kale, ka heli gal ah in ay ku kaydiso ku videos qabtay.
Isku day TunesGo (Mac) si ay isugu dayaan files ka iPod gudbaayo Mac.